Last nohavaozina: Mey. 14 2019 | 2 min namaky
Misy olona izay manao na inona na inona, fa mbola hahazo kokoa farany vehivavy raha ny marina no tsara noho izy ireo 'andraikitra. Misy olon-kafa koa, izay miezaka ny zavatra rehetra azo atao mba ho ny vehivavy iray ny olona, fa na dia miady mafy mba Woo vehivavy iray. Ireto ambany ireto ny torohevitra ho an'ny olona sasany anisan'ny sokajy faharoa; ireo soso-kevitra manaraka dia hanampy azy ireo hahatakatra inona marina dia tokony atao mba ho zana-borona andriamby.
Fantaro ny fomba tsara eo amin'ny masony
Raha toa ka tsy misy zana-borona voajanahary andriamby, Tsy afaka manantena ny hahita mpivady ny maso rehetra manaraka anao. Izany, rehefa miditra ao anatin'ny efitrano rakotry ny vondron'olona iray, Scan aloha ianao io mba mitady mafy ny fomba voajanahary voalohany be ny saina ianao mahazo.
Aza miezaka manao na inona na inona mba haka ny hafa adaladala’ ny saina; mahatsiaro anao eto nanidy izany gazes amin'ny vehivavy tsara tarehy, ary tsy manolotra ny tenanao ho toy ny mpanao hatsikana. Rehefa Scan ny efitrano, tokony hahita antoko iray, fara fahakeliny, mampiseho miahy anao; raha mahita azy mitaiza ny volomaso ary manomboka sy mitsikitsiky anao, mamaly miaraka amin'ny tsiky sy ny miezaka hanatratra azy mba hanana karazana fifandraisana.
Nanontany tena ve ianao raha tsy mahita na iza na iza locking ny fijeriny izy, na mitsiky anao? Izany no inoana mba hitranga raha mandeha ho miadana norefesiny koa Notarafina. Indrindra ny vehivavy (indrindra fa ireo izay mahita ny olona efa tonga tao amin'ny efitrano mankaleo) foana nijery manodidina sady mahay mba hahitana raha toa ny olona izay vao niditra ny efitrano mendrika ampy; izany, Notarafina ny miadana dia hamela anao ho tsara eo amin'ny masony amin'ny amin'ny kely indrindra ka.
Azoko, aza manome izany
Ary izany no fomba Notsapaina sy nosedraina; vehivavy lehibe indrindra mpamono olona eo amin'izao tontolo izao izany, ary mahazo vokatra lehibe. Mba vehivavy tsara, ianao dia tsy maintsy mianatra ny tsy miraharaha azy ireo. Ohatra, raha tianao ny vehivavy manintona indrindra ao amin'ny vondrona efatra na dimy liana ao aminao, mandeha fotsiny ny vondrona sy ny hiresaka ny zazavavy rehetra afa-tsy ny olona no te-hitaona.
Vehivavy, na manao ahoana na manintona toky izy ireo, mankahala fotsiny tsy noraharahiana. Manome azy ireo aotra ny saina dia midika hoe dia manomboka manao zavatra mba handresy ny fankasitrahanao.
Aoka ianao ho vonona ny hametraka fanontaniana
Rehefa mihaona ny vehivavy no ho an'ny voalohany, fa tsy miresaka momba ny tenanao, mametraka ny fanontaniana. Ny vehivavy irrespective ny taona, akademika fiainany sy ny asa tia miresaka fotsiny momba ny tenany. Izany, izy ireo ny zava-misy fotsiny tia rehefa sendra olona iray Henoy tsara; zana-borona lasibatry ireo matetika dia mpihaino tsara indrindra eran-tany.
Anontanio momba ny fialam-boly, ny nofy, ary ny fiainany iray manontolo; izy no hiresaka, resaka sy ny lahateny. Ho azo antoka mihaino na inona na inona izy hoe tsara araka Mety hahasorena raha mangataka ny soso-kevitra, ary tsy afaka manome ireo raha ny marina rehefa tsy mihaino azy.
Ny soso-kevitra ambony dia mampiseho fa mba ho zana-borona iray andriamby mila manao zavatra mihoatra noho ny tsara tarehy, fanimboloana. Mba hahazoana tsara ny vehivavy dia tsy maintsy aloha ry zalahy manana mahasarika persona; toetra hafa rehetra avy manaraka.